नमिलेको जोडीलाई खेलकुदले मिलाउँछ : पूर्वमन्त्री श्रीपाइली - Sadarline
प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र १३, २०७५ | 268 Views ||
नेपालगञ्ज : पुर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइली बृहत आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनहुने प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत बाँके, बर्दिया र दांगका प्रमुख भेन्यु अवलोकन गरी संघीय राजधानी फर्किएका छन् । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद साविक मध्यपश्चिमाञ्चलमा आयोजनाको जिम्मेवारी उनको एकल निर्णयबाट भएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा दीर्घकालीन योजनातयार गरी कार्यान्वयन तहमा लगिएको बताउने पुर्व मन्त्री श्रीपाइलीले निर्माणाधीन संरचना हेरिसकेपछि समयमै आठौं गर्न सकिने धारणा राखे । उनै पुर्वमन्त्री श्रीपाइलीसँग गरिएको संवाद ।
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण भएका भौतिक संरचनाको अवलोकन गरेपछि के पाउनु भयो ? आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्न सकिन्छ ?
आठौँ राष्ट्रिय ०७५ साल मानै नेपालगन्जमा गर्ने हामीले उद्घोष गरिसकेका छौँ । तोकिएको मितिमा गर्न सक्यौँ भने खेलकुदका लागि ऐतिहासिक हुने छ । नेपालगञ्जलाई चिनाउने र प्रदेश नं. ५ का लागि अवसर पनि हो । आठाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यो बर्ष नै गर्न सम्भव छ । भौतिक पूर्वाधारहरु पनि धेरै बनिसकेको अवस्था छ । केही प्राइभेट सेक्टर र सरकारी भौतिक पूर्वाधार पनि यहाँ भएकोले प्रतियोगिताका लागि पर्याप्त संरचना भएको मैले पाए ।
नेपाल सरकारले २०७५ मा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । सरकार भनेको एउटा साँचो बोल्ने हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन जरुरी छ । सरकारले सत्य बोल्छ भन्ने आशा जनतामा हुन्छ, त्यसैले पनि पछिल्लो विरासतलाई तोड्दै यस पटक तोकिएको समयमै प्रतियोगिता गराउन जरुरी छ । यदि समयमै प्रतियोगिता गराउन सकिएनभने बर्तमान नेतृत्व र सरकारको अस्तित्व नै हराउनेछ । हामी २०७५ मै आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भनेर अभियानमै लागेका छौँ र गर्न पनि पर्छ । अव प्रतियोगिता गराउन सम्भव पनि छ ।
प्रतियोगितालाई मात्र ध्यानमा राख्दा कतै भौतिक पूर्वाधारमा असर त पर्ने होइन ?
भौतिक पूर्वाधारहरु अलपत्र पर्दैनन् किनभने विगतका प्रतियोगिता बाट केहीपाठ सिकेका पनि छौँ । जनताले आशंका गर्नु पनि स्वभाविक हो । म नेतृत्वमा रहिरहँदा मैले यो विषयमा राम्रोसँग वुझेको छु र सबैमा विश्वस्त रहन अनुरोध पनि गर्दछु । साथै खेलप्रेमीतपाई हामीले चासो राखिराख्न जरुरी छ ।
प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा हेर्दा खेरी के भन्नुहुन्छ ?
यसअघि पनिचौथो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नेपालगन्जमा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यो बेलाको भौतिक पूर्वाधारको तुलनामा प्रदेश ५ मा कायापलट नै भएको छ, तर भिआइपि प्याराफिट अझैँपनि निर्माणकै चरणमा भएकाले के प्रतियोगिता तोकिएको समयमा हुन सक्ला ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र १३, २०७५ 6:30:03 PM |
Posted in खेलकुद, ताजा समाचार, विचार, समाचार
Prevदैलेखको शिरिस्थानमा मिथेन ग्यास उत्खनन् गरिने
Nextनिर्मला हत्या प्रकरणमा अछामबाट दुई पक्राउ